Hargeysa: Dhoolla-tuskii taageerada KULMIYE iyo Weedhihii Madaxda sare ee Xisbiga (DAAWO SAWIRADA) | Somaliland.Org
November 28, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Munaasibad ballaadhan oo ay soo qaban-qaabiyeen dadweynaha ku dhaqan Xaafadda boqol iyo kontanka ee Degmada 26 June ee Magaalada Hargeysa oo lagu taageerayay Xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE, ayaa maanta lagu qabtay Xaafaddaas. Waxaana ka qayb galay Hoggaanka sare ee Xisbiga iyo taageerayaal kale oo tiro badan.
Masuuliyiinta ka socday Xisbiga KULMIYE oo si ballaadhan loogu soo dhaweeyay Munaasibaddan oo lagu qabtay Beerta Yuusuf Kirix ee Magaalada Hargeysa, ayaa hadallo soo-dhawayn iyo taageero-muujin isugu jiray ka sokow, waxa halkaa ka hadlay Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo Xukuumadda Madaxweyne Ryaale ku eedeeyay in aanay Doorasho qabashadeed diyaar u ahayn. Waxaanu sheegay in marka ay Xubnaha Komishanku soo laabtaan. “Waxaan halkan mahad-naq uga soo jeedinayaa Xaafadda 150-ka ee Degmada 26-ka June. Waxaan si gaar ah ugu mahad-naqayaa Aniisa Nuur Cigaal iyo Yuusuf Kirix oo dalka ka maqan, sida ay hawshan uga hawl-galeen ee ay noogu soo dhaweeyeen Xaafaddoodii iyo beertoodiiba. Waxa kale oo aan u mahad-naqayaa dadweynaha halkan isugu wada yimi..Waxaynu maanta maraynaa marxalad aad xasaasi u ah. waxa jiray in ay waqtiyada qaarkood ka soo gudubnay oo aynu ku siganay in uu dalkeenu burburo, iyada oo ay sabab u tahay mucangabnimada Maamulka maanta jiraa.” Ayuu yidhi Guddoomiye Siilaanyo. Waxaanu ku eedeeyay in Madaxweyne Rayaale damcay in uu xukunka xoog ku haysto oo uu aanu diyaar u ahayn in uu Doorasho qabto.
Guddoomiyaha KULMIYE wuxuu dadweynaha ugu baaqay inay nabadgelyadooda ilaashadaan oo ay heegan u ahaadaan hirgelinta mabaa’diidooda.
Waxa isna halkaa ka hadlay Maxamed Xaashi Cilmi oo Xukuumadda Madaxweyne Rayaale ku eedeeyay in ay hantidii umadda dhacayso, isla markaana wuxuu baaq u diray Ganacsatada Somaliland ee iibsatay dhul ay Xukuumaddu dhawaan iibisay oo uu u jeediyay in ay iska ilaaliyaan inay dhul dambe iibsadaan. Waxaanu tilmaamay in Xukuumadda Madaxweyne Rayaale diyaar u ahayn la-xisaabtan.
Xoghayaha guud ee KULMIYE Keyse Xasan Cige oo isna halkaa ka hadlay, ayaa soo jeediyay in Xukuumadda Madaxweyne Rayaale oo uu sheegay in ay adeegayaal u yihiin umadda iyo shacabka doortay lala xisaabtamo.
Maxamed Cabdi Iskeerse oo isna halkaa ka hadlay ayaa hadalladiisii waxa ka mid ahaa, “Maanta xorriyad dambe oo aynu u soo jeedo ayaynu u baahanahay iyo in dhibaatooyinka wax-qabad-la’aanta laga baxo.” Waxaanu ku dheeraaday Barnaamijka Siyaasadeed ee Xisbiga KULMIYE iyo waxyaabaha u qorshaysan in uu qabto haddiiba uu talada ku guulaysto.
Madaxa Ololaha Doorashada Madaxtooyada ee Xisbiga KULMIYE u qaabilsan Gobollada galkeedka Somaliland Baashe Cabdi Gaboobe oo isna halkaa ka hadlay, ayaa sheegay in Xisbiga KULMIYE uu ku faano Ururkii SNM, halka buu yidhi, “Xukuumadda iyo Xisbigeedu ka caydo SNM, isla markaana ay KULMIYE kaga tilmaantay Argagixiso.”
Guddoomiyaha Gobolka Hargeisa ee Xisbiga KULMIYE Cabdilaahi-Xamarji ayaa isaguna sheegay in taladii dalku ay gacanta u gashay dad aan taariikh ahaan ka war qabin. “..Balse, waxa Ilaahay mahaddii ah in aydaan Axmed Siilaanyo uga waramayn Beerta Ilma Kirix.” Ayuu yidhi Xamarji.
Guddoomiyaha Garabka Haweenka ee Gobolka Hargeisa Luul Cismaan Yuusuf oo iyana halkaa ka hadashay, ayaa hadalladeedii waxa ka mid ahaa, “Xisbiyadeenu waa Xisbiyadii Qarankeena, laakiin waxaynu ku kala dooranaynaa wax-qabad iyo Maamul-wanaag.”
Sidoo kale, waxa halkaa ka hadlay dad uu ka mid ahaa Siciid Cabdilaahi oo ku hadlayay Magaca Afka Xaafadda, waxaanay ku dheeraadeen siday u taageersan yihiin Xisbiga KULMIYE.
Halkan hoose ka daawo Sawirada Munaasibadda: